Press releases- Apicmo cdmo Nsukka
Monosialotetrahexosylganglioside sodium bụ protein na-adịghị edozi ahụ bụ nke mkparịta ụka ya bụ GM1. Continue Reading
Pyridine bụ ụdị heterocyclic bụ isi nke azine ụdị. A na-enweta pyridine site na benzene site na ngbanwe nke òtù CH site N-atom. Ngwurugwu Pyridine dị ka ihe dị na benzene, n'ihi na ọ bụ site na nnọchi nke CH na-emetụta ya site N.
Otu ngwakọta bụ ihe ndị na-eme ka e nwee ihe abụọ yiri mgbanaka abụọ. N'akụkụ, ihe owuwu ahụ nwere ike ịbụ otu ma ọ bụ dị iche, na atọ nke na - ejikọta ọla abụọ ahụ a na - akpọ spiroatom (nkeji nrịta), na - abụkarị 4 carbon (nke a na - akpọkwa carbon), ọ pụkwara bakwa silicon, phosphorus, ma ọ bụ arsenic
2- Chloro-5 methylpyrimidine nwere uhie na-acha odo odo na-acha uhie uhie na-acha ọkụ ọkụ. Ụfọdụ ga-akọwa onyinyo ndò dị ka ndị na-acha ọcha. O nweghị isi na ihe dị arọ nke 128.56 grams kwa ahihia. E kwuru na usoro ọgwụ ya bụ C5H5CIN2 na Simplified Molecular - System Entry System (SMILES) dika CC1 = CN = C (CL) N = C1. Ngwakọta ahụ nwere ebe na-agbaze nke dị n'etiti 89-92 degrees centigrade, na ebe na-esi esi na 239
07 / 19 / 2018Ihe site: APICMOCategory: CMO ọdịnaya1 Comment0 amasị
07 / 18 / 2018Ihe site: APICMOCategory: CMO ọdịnaya1 Comment0 amasị
Gụsịrị akwụkwọ site na Ngalaba Na-ahụ Maka Ọdịdị Na-ahụ Maka Ọdịnaya, na Mahadum Stanford, Mahadum Stanford
07 / 18 / 2018Ihe site: APICMOCategory: Ịmara ahụike2 Comments0 amasị
Ọkachamara dị mma na steeti njikọ nkà nke heterocyclic ogige. Njikere nke ngwakọta nke ndị na-emepụta ihe na nkà na ntinye nke benzonitrile, phenol, naphthol, coumarin, thiocoumarin, quinoline, quinozoline, pyrimidine, pyridine, indole, ebezole, Imidazole na benzimidazole.